विश्वभर काेराेना संक्रमितकाे संख्या ७ कराेड बढी : अमेरिकामा १ कराेड ६० लाख - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज कोरोना विशेष विश्वभर काेराेना संक्रमितकाे संख्या ७ कराेड बढी : अमेरिकामा १ कराेड...
विश्वभर काेराेना संक्रमितकाे संख्या ७ कराेड बढी : अमेरिकामा १ कराेड ६० लाख
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०९:३७
काठमाडाैं, २६ मंसिर । विश्वमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुनेकाे संख्या ७ कराेड नाघेकाे छ ।
विभिन्न तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटर्स डट इन्फोका अनुसार शुक्रबार बिहानसम्म काेराेना संक्रमितकाे संख्या ७ कराेड ६ लाख ८१ हजार ५ सय ५० पुगेकाे छ । काेराेना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या भने १५ लाख ८७ हजार ४ सय ६२ पुगेकाे छ ।
मृत्यु दर र सङ्क्रमित दर बढिरहेसँगै निकाे हुने दर पनि बढिरहेकाे छ । अहिलेसम्म कुल सङ्क्रमितमध्ये ४ कराेड ९१ लाख २९ हजार ३ सय ३९ जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
पछिल्लाे २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर ६ लाख ५९ हजार ९ सय ४२ नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने १२ हजार ५ सय २२ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । त्यस्तै पछिल्लाे २४ घण्टामा ४ लाख ५६ हजार उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
कोरोनाको उद्गम स्थल चीन भए तापनि कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा अमेरिका पर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा २ लाख ९९ हजार ५९५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितकाे संख्या भने एक कराेड ६० लाख २२ हजार ९ सय ६४ पुगेकाे छ ।
संक्रमितमध्ये ९३ लाख २८ हजार ८६९ भने पूर्णरूपमा निको भइसकेका छन् । अहिले त्यहाँ ६३ लाख ९४ हजार बढीमा कोरोनाको सक्रिय रहेको छ । संक्रमितमध्ये २७ हजार ३३७ जनाकाे अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत एसियाली देशहरूमा सबैभन्दा बढी काेराेना भाइरसक संक्रमितहरू फेला परेका छन् । भारतमा पछिल्लाे समय दैनिक संक्रमित संख्या र मृत्यु संख्या झन् बढ्दै गएकाे छ ।
अहिलेसम्म भारतमा ९७ लाख ९६ हजार बढी संक्रमित भएका छन् । काेराेनाका कारण १ लाख ४२ हजार २ सय २२ जनाकाे ज्यान गएकाे छ ।
संक्रमितमध्ये ९२ लाख ९० हजार बढी पूर्ण रूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ ३ लाख ६४ हजार बढीमा काेराेना सक्रिय रहेकाे छ । अहिले त्यहाँ ८ हजार ९४४ जनाकाे अवस्था गम्भीर रहेका छ ।
अमेरिका र भारतपछि सबैभन्दा बढी संक्रमित हुनेमा ब्राजिल पर्छ । अहिलेसम्म त्यहाँ काेराेनाबाट संक्रमित हुनेकाे संख्या ६७ लाख ८३ हजार ३ सय ४४ पुगेकाे छ भने काेराेनाका कारण मृत्यु हुेकाे संख्या १ लाख ७९ हजार ९३१ पुगेकाे छ ।
संक्रमितमध्ये ५९ लाख ३१ हजार पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ ६ लाख ७१ हजार बढीकाे काेराेना सक्रिय रहेकाे छ । तीमध्ये ८ हजार ३१८ काे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
रूस पनि काेराेनाभाइरसको हटस्पट बनेकाे छ । अहिलेसम्म त्यहाँ २५ लाख ६९ हजार मानिस काेराेनाबाट संक्रमित भएका छन् । काेराेनाका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या भने ४५ हजार २८० पुगेकाे छ ।
संक्रमितमध्ये २० लाख ३३ हजार बढी पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ ४ लाख ९० हजार बढीमा काेराेना संक्रिय रहेकाे छ । तीमध्ये २३ सयकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
सबैभन्दा बढी काेराेना संक्रमित हुने देशमा फ्रान्स पाँचाै नम्बरमा पर्छ । अहिलेसम्म फ्रान्समा २३ लाख ३७ हजार ९६६ जनामा काेराेना संक्रमण भएकाे भने ५६ हजार ९४० जनाकाे मृत्यु भएकाे छ ।
संक्रमितमध्ये १ लाख ७४ हजार बढी पूर्णरूपमा निकाे भएका छन् । अहिले त्यहाँ २ लाख १० हजार बढीमा काेराेना संक्रिय रहेकाे छ । तीमध्ये २९ सयकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ ।
अघिको समचार पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ मंसिर २६ गते (सन् २०२० दिसेम्बर ११ तारिख) शुक्रबार : ॐ जय सन्तोषी माँ, दुर्गा भवानी
अर्को समचार कर्मचारीको पहुँच त यस्तो पो ? सरकारी निर्देशनलाई चुनौति दिँदा पनि महावाणिज्यु दुतबाट पुरस्कृत